धरान उपमहानगरपालिका १६ नं. वडा कार्यालयले वडाका विपन्न परिवारलाई रासन कार्ड वितरण गरेको छ । पहिलो चरणमा वडाका ३२ परिवारलाई रासन कार्ड वितरण गरिएको हो ।
रासन कार्ड पाएकाहरुले निःशुल्क रुपमा खाद्यान्न प्राप्त गर्ने वडाध्यक्ष दिलकुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार रासन कार्ड वितरण गरिएका ३२ परिवारलाई परिवार संख्या हेरेर खान पुग्ने गरी दिइने व्यवस्था मिलाइएको छ । जस अनुसार २–३ जना सम्म भएका परिवार हुनेहरुलाई मासिक २५ केजी चामल दाल, नुन, खानेतेल एक÷एक केजीका दरले दिइने छ भने एकजना मात्र भएकालाई चामल १५ केजी र दाल, नुन, खानेतेल एक एक÷एक केजीका दरले दिइनेछ ।
त्यस्तै गरी वडाका विपन्न २० परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा समेत गरिएको छ । २० परिवारका एक सय जनाको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ । नेपाल सरकारले लागु गरेको बिमाको रकम वडा कार्यालयले तिरिदिएर बिमा गरिदिएको अध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो । उहाँले लक्षित वर्गको कार्यक्रम अन्तर्गत छुट्टिने रकमबाट काम गरेकोले यो काम एक÷दुई बर्ष मात्र नभइ निरन्तर चलिरहने बताउनुभयो ।
रासन कार्ड वितरण गर्दै सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले धरानमा पहिले कार्यक्रम भएको भन्दै प्रसंसा गर्नुभयो । जनप्रतिनिधीले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्न नसकेको भन्ने आलोचना भइरहेका बेला धरानमा यस्तो कार्यक्रम हुँदा खुसी लागेको बताउनुभयो । धरान उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जु भण्डारीले १६ नं. वडाबाट सुरु भएको कार्यक्रम धरानभरी हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने साथै सामाजिक सेवाको कार्य समेत भएकोले १६ नं. वडाका जनप्रतिनिधीलाई बधाई समेत दिनुभएको थियो । रासन कार्ड प्राप्त गर्ने सबै काम गर्न नसक्ने र आम्दानीको कुनै स्रोत नभएकाहरु भएको वडाध्यक्षले प्रष्टीकरण गर्नुभएको थियो । रासन कार्ड पाएपछि सरस्वती थापा, रमेश राई, मदन राई लगायत खुसी हुनुभएको थियो ।